केश कपाल मापन कसरी गर्ने सिंची लम्बाई र आकार छनौट गर्दै - जापान कैंची
हेयरड्रेसि Sc कैंची कसरी नाप्ने
जुन ओह द्वारा जुलाई 09, 20213मिनेट पढ्ने
जबकि शैली र रंग कैन्सरहरू खरीद गर्दा विचार गर्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्, आकार सजीलै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ब्लेड को आकार र लम्बाई आवश्यक छ।
कुन साइज कैंचीहरू किन्नु पर्‍यो भनेर जान्न गाह्रो हुन सक्छ। यी निर्देशनहरू हुन्।
यो जापान कैंची टोलीले कपाल कैंची साइज मापन गर्न सबैभन्दा सही जानकारी प्रदान गर्दछ।
यो कैंची मापन गर्ने तरिका, कैंची ब्लेडको लम्बाई, आयाम, र अन्य धेरै विवरणहरू कसरी मापन गर्ने भनेर छ ताकि यो तपाईंको लागि सही छनौट गर्न सजिलो हुनेछ। यसलाई प्राप्त गरौं!
केहि स्टाइलिस्टहरू छोटो कैंची प्रयोग गर्न रुचाउँछन्, जबकि अरूले लामो क्यान्सर लम्बाइ मन पराउँछन्। यो सबै तपाईं कस्तो प्रकारको कटिंग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। यसको ब्लेडको टुप्पोबाट सबैभन्दा लामो औंला प्वालमा सिसाको आकार नाप्नुहोस्। औंला आराम समावेश छैन।
तपाईंको हथेलीमा एक जोडी कैंची राख्नुहोस्। औंला छेद तपाइँको औंठको आधार मा छुनु पर्छ। ब्लेड को टिप तपाइँको बीचको औंला मा हुनु पर्छ।
बिन्दुमा सुरू गर्नुहोस् जहाँ औंला आराम (वा टाang) औंला प्वालको लागि फ्रेममा संलग्न हुन्छ। टिपमा सार्नुहोस्। मानक ह्यान्डलहरूसँग तुलना गर्दा, क्रेन ह्यान्डलहरूसँगको कैंचीको समग्र लम्बाइ भन्दा अक्सर छोटो ब्लेड लम्बाइ हुनेछ। यो कैंचीको ब्लेड लम्बाइ नाप्न आवश्यक छ, समग्र लम्बाईलाई होइन।
सही कैंची छनौट गर्नु किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
नाई र कपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण कैंची हो। यो शल्यचिकित्सकको लागि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जुन स्केलपेल वा पेन्टब्रस एक चित्रकारको लागि हो।
यसैले हामीले यो महत्त्वपूर्ण गाईड सिर्जना गरेका छौं कि कसरी राम्रो हात फेला पार्नको लागि तपाईंको हातले तपाईंको कैंची मापन गर्न सकिन्छ!
यो स्वाभाविक हो कि तपाईको कैंची प्रयोग गर्न सजिलो होस् भन्ने तपाई चाहानुहुन्छ। सहि कैंची छनौट गर्दै बनाउन वा तपाईंको केश तोड्न सक्नुहुन्छ।
कपाल कपाल कसरी छनौट गर्ने?
मानौं तपाईं सैलुनमा शिफ्ट सुरू गर्न लाग्नु भएको छ। यो सामान्य दिन हो, यो कि बाहेक तपाईंले एक नयाँ जोडी क्यान्सर किन्नुभयो।
तपाईले याद गर्नु भयो कि तपाईको पहिलो कट पछि केहि ठीक छैन। कपाल काटिए पछि कपाल ठिक देखिँदैन - काटिएको पूरा भएता पनि विभाजन समाप्त हुन्छ!
तपाईंको क्यारियर समाप्त भयो यदि तपाईं कम-गुणवत्ता कतराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो उत्तम रूपमा किन तपाईंलाई अहिले नै उत्तम लगानी गर्नुपर्दछ! तपाईं माथिको चित्रमा हेयरड्रेसरको जस्तो देखिनुहुनेछ।
सही जोडी छनौट गर्दा, गुणवत्ता विचार गर्न केवल एक कारक हो। त्यहाँ अरु धेरै छन्।
सोच्नको लागि अर्को कुरा तपाईले मन पराउनुहुने कपालको शैली हो। यसले तपाईंलाई सहि छनौट गर्न मद्दत गर्दछ कपाल काट्ने कैंची तिम्रो लागि। के तपाईं नरम किनारहरूको साथ तहहरू सिर्जना गर्न मास्टर हुनुहुन्छ? सायद तपाई बढि ब्लन्ट शैली प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं निश्चित हुनुहुन्न, तर तपाईंसँग लगभग केहि पनि सिर्जना गर्ने क्षमता छ। यदि हो भने, यो सेट प्राप्त गर्न लायक छ।
यो उत्तम हुन्छ यदि यदि तपाइँले पनि विचार गर्नुभयो भने तपाइँको कैंची हुनु पर्छ कि हुँदैन बाया हाते वा दाहिने हात तपाईं तिनीहरू हुन चाहनुहुन्न पकड गर्न गाह्रो कपाल काट्दा, जुन तपाईंको कपालमा प्रतिबिम्बित हुनेछ।
तपाईंले आकार पनि विचार गर्नुपर्नेछ। यो लेखको मुख्य पोइन्ट हो। सहि कपाल कपाल छान्नु यो सजिलो नहुन सक्छ, तर यो सम्भव छ। तपाईं हुन सक्ने कुनै हेयरड्रेसि sc कैंची प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको औंलामा औंलाहरू राख्नुहोस् ताकि थम्बको प्वालले तपाईंको औंठालाई छुनेछ। ब्लेडको टिपले तपाईंको बीचको औंलाको अन्तमा छुनु पर्छ।
तपाईको हजाम कैंचीको लागि सही आकार निर्धारण गर्न पनि यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो क्यान्सरको आकार निर्धारण गरेपछि, कुन जोडीलाई अनलाइन अर्डर गर्ने भनेर निर्धारण गर्न तिनीहरूलाई मापन गर्नुहोस्। एक शासक कैंची मापनको लागि उत्तम उपकरण हो। शासक र कैंची एक अर्को सँग समानान्तर राख्नुहोस्। अब तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको कैंची कति लामो हुनुपर्छ।
कैंचीको नाप औंला प्वालबाट टिपमा लिनु पर्छ। आफ्नो मापनको शीर्षमा औँलाको आराम कहिले पनि नतोड्नुहोस्। मूल जर्मन विधिमा औंलाले विश्राम समावेश गर्दछ। यो हालसालै हेयरड्रेसि sc कैंची बेच्न लोकप्रिय छ कि स्क्रू-अन फिंगर रेस्ट छ।
यस साइटसँग स्टाइलिस्टहरूको लागि यत्तिको सहयोगी जानकारी छ जसलाई हेयरड्रेसि sc कैंची खरीद गर्नु आवश्यक छ साथै स्टाइलिस्टको रूपमा तपाईंको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि चीज। म एक स्टाइलिस्ट होईन तर हेयरस्प्रेसि sc कैंची मापन गर्ने जस्ता चीजहरूको सल्लाहहरू र सल्लाहहरूको खरीदबारे केही मार्गदर्शनको लागि यहाँ आउने छु।
अफसेट वी एस स्ट्रेट (विपक्षमा) ह्यान्डलहरू
जुन ओह द्वारा जुलाई 09, 20212मिनेट पढ्ने
हेयरस्टाइलिस्टहरूको लागि उपकरण र उपकरणहरू
जुन ओह द्वारा जुलाई 09, 20219मिनेट पढ्ने
प्रोफेशनल्स २०२१ का लागि १० सर्वश्रेष्ठ कपाल कात्तीहरू
जेम्स एडम्स द्वारा जुन 14, 2021 14 मिनेट पढ्ने